रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीलाई दिइन पुग्ने गरी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले राम्रो काम गरोस भनेर भन्दा सरकारमा बसेकाहरुलाई विरोध वा आलोचना गर्यो भनेर लाग्नु स्वभाविक भएको स्पष्ट पारेकी छिन । आइतबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
झाँक्रीले भनिन “आफ्नो सरकारको किन विरोध गर्छु ? म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ । सांसद छु । सरकारले संसदमा ल्याएको विलको पक्षमा मरेर लागिरहेको छु । त्यस्तो त म कसरी हुन सक्छु र ? उनले सरकारले यो अवधिमा राम्रा काम गरिरहेको पनि सुनाईन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पनि सरकारले सराहनीय काम गरेको उनको तर्क छ ।
नेतृ झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो साँढे दुई वर्षको अवधिमा गरेका कामहरु राम्रो भएपनि नगरेका कामपनि केही रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन नराम्रा चाहीँ कतिपय मिडियामा आईरहेका छन् नि । राम्रा काम भएका त भैनिहाले । नराम्रो काम चाहीँ कतिपय अपारदर्शीता, भ्रष्टाचारका कुरा, भ्रष्टाचार अनुकुल गर्न कानूनी संशोधनको
कुरादेखि लिएर केही विजनेस घरानासँगको आशक्तिको कुरा, त्यसैले नै प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा पारेको छ । यति होल्डिङदेखि ओम्नीसम्म आईपुग्दा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त जनताले असाध्यैं धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँमा त पुर्यायो नि त । उहाँले मौका दिनुहुँदैन थियो । सरकारले गर्न सक्ने कामभन्दा पनि नगर्नसक्ने कामतिर जनताको ध्यान डाईभर्ट गरिदियो ।
यसले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचना भयो । चुच्चे रेल, पानीजहाज, घरघरमा पाईपलाईनमा ग्याँस, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने यी कुराहरु के थिए भने तत्काल हुने विषय थिएनन् । त्यो उहाँको टिममा राम्रो विश्लेषण गर्नसक्ने मान्छेहरु भईदिएको भए चाहीँ उहाँलाई यो बोल्नलाई ईनकरेज गर्दैन थिए । किनभने हामीले हुने कामभन्दा नहुने काममा डाईभर्ट गर्यौं ।
त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीले जिद्दि गरिरहनुभयो । त्यो गर्नपनि जरुरी थिएन् । उनले एउटा व्यक्तिको फेशबुक स्टाटसमा सचिवालय बैठक प्रभावित हुने, मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि घण्टौ त्यही कमेन्टको विषयमा बहस हुने यी सबै अनुत्पादक काम भएको टिप्पणी गरिन । उनले भनिन कुरा आखिर केही न केही माध्यमबाट बाहिर आईनैहाल्छ ।
झाँक्रीले सरकार परिवर्तनको हल्लाबारे टिप्पणी गर्दै आजको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प नभएको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, यो नेकपाको बहुमतको सरकार हो । उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो । उहाँहरुले पार्टी एकता गर्दा के लेनदेन गर्नुभयो, यो हाम्रो जानकारीको विषय होईन । आज सिनको कुरा गर्दा उहाँ ५ वर्षकै म्याण्डेट पाएर प्रधानमन्त्री भएको नेता हो ।
हामीले २०७४ को चुनावमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्धवारको रुपमा एक्सपोज गरेर चुनावमा गएको हो नि । नेकपाले बहुमत ल्याउनुमा केपी ओली पनि एउटा कारण हो । उहाँबाहेक अरु कोही पार्टी अध्यक्ष भएको भए को को ले बखेडा झिक्थे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गाडी नकिन्ने र सो रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय राष्टपति भण्डारीको नभएर अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,”यो अर्थमन्त्रालयले नै पुँजीगत खर्च नगर्ने भनेर परिपत्र गरिसकेको कुरा हो । चैत्र १९ गते निर्णय गरेर चैत्र २० गते परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
राष्टपति कार्यालयबाट यही बैशाख ५ गते एउटा चिठ्ठी देखें । किनभने मलाई हाँसो लाग्यो । यो चाहीँ राष्टपति एकदम मितव्ययी भनेर देखाउन गरेजस्तो भयो । यस्तो नाटकीय कामपनि गर्न परेन नि । यो त सरकारकै पैसा हो । उहाँले आफ्नो गोजीको दिएको भएको भए पो कुरा गर्नु । उहाँको दुई वर्षको तलब कोरोना कोषमा हाल्छु भनेको भए समाचार हुन्छ ।”